Shina: Fahavalo An’eritreritr’i Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2011 2:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Svenska, Italiano, English
Mitohy mihamafy ny fifanolanana momba ny resaka sisintany eo amin'i Shina sy Japana taorian'ny nisamborana sambo Shinoa iray mpanjono, Zhang Tianxiong, tamin'iny herinandro lasa iny fa hoe nanitsaka ny fari-dranomasina Japone ary avy eo nitondra ny mpiambina morontsirak’ity firenena ity taminà fifanenjehana nandritra ny ora efatra teny an-dranomasina teny. Izany dia nifàrana rehefa voadona ilay sambo Shinoa ka voasambotra mba hatao famotorana ireo tantsambo folo tao anatiny.
Araka ny ankamaroan'ireo tatitra, Zhang dia nanjono tany anatin'ny faritra izay efa fantany rahateo fa tsy azony anaovana izany, saingy tsy navela handalondalo foana ny maha-fotoana fanararaotra azy ity mba havadika ho raharaha fitiavan-tanindrazana ho an'ny sasany. Na, tahaka izay nosoratan'i [zh] Wu Ge, mpanao famakafakàna ny raharaha miaramila sy tonian-dahatsoratra aminà gazetiboky ao amin'ny bilaoginy
Tsy azo ialàna ny hiafaran'ny karazana fifandirana toy ity amin'ny fiharatsian'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta, ka tsy ananan'ireo sampandraharaha diplaomatika safidy afa-tsy ny fitodihana amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa, hiara-mandinika sy hamaha ny olana. Saingy eo indrindra no tonga ny tena olana goavana. Misy hatrany ny andianà teratany Shinoa mamadika avy hatrany ny fifanolanana tahaka ity ho voninahi-pirenena (amin'ny endrika fankahalàna, tsy firaharahiana ary indraindray teny fandranitana mihitsy), mandray toerana sarotra, tonga hatramin'ny fandinihana ny hoe fotoana izao hidiran'ny firenena roa tonta anaty ady.
Dikasarin'ny vaovao tao amin'ny fahitalavitra
Ary ny fisamborana an'i Zhang ihany koa, voasazy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena, dia mifanandrify amin'ireo tatitry ny mpampahalala vaovao Shinoa, izay mitanisa mpampahalàla vaovao Japoney milaza hoe hisy fanazarantena goavana an-dranomasina iarahan'ny Japoney sy ny Amerikana, hatao ao Kyushu amin'ity herinandro ity. Tsy hoe fotsiny voalaza ho voalohany amin'izay fanazarantena maro mbola ho avy izy io, fa amin'izao fotoana dia voalaza fa naelin'ny mpampahalàla vaovao Japone betsaka tokoa fa hoe i Shina no heverina hatao ho toy ny fahavalo an'eritreritra.
Momba izay, ilay bilaogeran'ny Phoenix Jin Zishan dia manoratra hoe [zh]:
Nampidirin'ny mpampiely vaovao Japoney ho anaty lalao i Shina, ho toy ny “fahavalo an'eritreritra”, saingy tsy fantatsika raha tena maneho tokoa ny toerana noraisin'ny manampahefana ao Japana izany. Mety ihany koa hoe avelan'ny Japana ho anjaran'ny mpampiely vaovao ny milaza izay zavatra manahirana ny fanjakana ny manambàra azy mivantana, na mety koa hoe manampy trotraka amin'ny famelomana ny afo efa misy rahateo ireo mpampiely vaovao. Dia hahita izay notadiaviny tokoa moa izany ny vahoaka. Kanefa eo amin'ny sehatra diplaomatika ofisialy, ary indrindra fa rehefa resaka fanazarantena ara-tafika no misy, ny fepetra dia manao hoe ny fomba filàza “fahavalo an'eritreritra” dia tsy ataotao foana sy abaribary mandeha ho azy toy izao ny fampiasàna azy.
Tsy misy dikany mihitsy ny fametrahana an'i Shina ho “fahavalo an'eritreritra”, ary indrindra indrindra fa amin'izao fomba “mibaribary” be izao. Ny lalao misy eo amin'i Shina sy Japana dia any amin'ny faritra manodidina ny nosy Diaoyu no mitranga ary ny Ranomasin'i Shina Atsinanana, hatreto aloha i Shina dia mbola nahavita nifehy tena sy tsy naneho fihetsika mahery setra. Raha izay no raisina, inona no mahatonga an'i Shina ho nampidirina ho anaty lisitry ny “fahavalo an'eritreritra” any anaty fampahalalam-baovao Japoney?
Tsy ilàna fanontaniana akory fa ny fanambaràna an'i Shina ho “fahavalo an'eritreritra” dia ezaka iray hafa entina manamafy ilay antsoina hoe “kajikajin'ny loza mitatao avy ao Shina”. Ny fiampangàna tsy marim-pototra an'i Shina ho “loza mitatao” dia ezaka tsotra izao fotsiny hikolokoloana rivotra ara-politika tsy milamina ao Japana, sy ho fanaratsiana endrika an'i Shina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ezaka iray io haneren'i Japana ny tànan'i Shina ao anatin'ity fifaninanana eo amin'ny firenena roa tonta ity, fihetsika iray azony araraotina ihany koa hanafenany ny “farangony” tsy ho hitan'izao tontolo izao.
Ny fametrahana an'i Shina ho “fahavalo an'eritreritra” dia manome fahafahana an'i Japana hanorina tsara ny tanjany ara-miaramila, ahafahany koa mandrafitra ny politika any amin'ny faritra, ary miroso tsikelikely amin'ny fanatanterahana. Tsy zava-miafina intsony ny hoe i Japana, izay manana tanjaka nokleary goavana tokoa sy tahiry nokleary, dia niezaka hatrany ny hampahatanjaka ny fahafahany hiaro tena, sady manararaotra ny zava-mitranga rehetra misy mba hanapariahana izany any ivelan'ny sisintaniny.
Io 3 Novambra io no tsingerintaona faha-65 ho an'ilay fanamafisana ny “Lalampanorenan'ny Fandriampahalemana” taorian'ny ady ho an'i Japana, izay noraisin'ny elatra havanana eo amin'ny firenena ho fotoana fanararaotra hangatahana ny hitondràna fanovàna ilay “Lalampanorenan'ny Fandriampahalemana”, sy ny hoe hiantsoana ny “Hery Fiarovan-tenany” ho “Tafika” amin'izay. Japana koa dia efa mihevitra ny “hanome anarana” ireo nosy kely miisa 39 manodidina, alohan'ny faran'ity taona ity, ary, sady manitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena ihany, hatramin'ny fanitàrana ny faritra manokana ara-toekareny eny an-dranomasina.
Mivandravandra izao fa mikatsaka ny hampiroborobo sy hanitatra ny dindony hatrany amin'ny ranomasin'i Shina Atsinanana mihitsy i Japana.